Puntland oo xukuno la yaab leh ku riday siyaasiyiin & odayaal shir u aaday Cadaado! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarrunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in maxkamadda darajada 1-aad ee Gobolka Nugaal ay maanta xukuno ku riday 14 qof oo isugu jira siyaasiyiin, saraakiil iyo duubab dhaqan, kuwaasoo kasoo jeeda Puntland, kuna sugan degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo ay ka socoto qanqaabada dhismaha maamulka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Xubnahaan oo ka kooban 14 ayaa maamulka Puntland ku eedeeyey wax uu ugu yeeray Khiyaano maamul, iyagoo Cadaado u tegay ka qeybgalka maamulka Gobollada Dhexe ee loo dhisayo Mudug iyo Galgaduud.
Maxkamada ayaa 3 ka mid ah dadkaas oo kala ah:- C/wali Muuse Shire, C/risaaq Cismaaciil Xasan Darwiish iyo C/salaan Cabdi Sh. Doon ku xukuntay xabsi daa’im halka 11-ka kale ay ku xukuntay 10 Sano oo xarig ah. Dhamaan dadka la xukumay ma joogin maxkamada, gacantana laguma hayo.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamada darajada Koowaad ee gobolka Nugaal, Maxamed Xareed Faarax ayaa maxkamada ka hor akhriyey Magacyada eedeysanayaasha oo uu ugu horeeyo C/wali Muuse Shire oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladdii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa C/raxmaan Faroole.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee gobolka Nugaal, Axmed Salaad Maxamed ayaa ku dhawaaqay go’aamada ay maxkamada ka gaartay eedeysanayaasha maxkamada dacwadoodu ay keeneen xeer ilaalinta maxkamada, wuxuuna sheegay in ay shaqsiyaadan ay u gafeen waxa uu ugu yeeray xoriyada Puntland iyo xuduudaheeda iyagoo ka qayb galay shir aysan Puntland ka raali ahayn oo lagu kala goynayo dhulka Puntland, sida uu ku qaaligaasi ku andacooday.
Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland, Maxamuud Xasan oo warbaahinta kula halday xarrunta maxkamadda ayaa digniin u diray cidkasta oo qorshaynaysa in ay aado magaalada Cadaado, kana qeybgasho shirka maamulla gobollada Dhexe.
Maamulka Puntland ayaa ah maamul aad ugu dooda xuduud beeleedka, kana soo horjeeda in maamul goboleedyada la isu raaciyo qaabkii gobollada Soomaaliya u sameysnaayeen xilligii burburku dhacayey oo ahaa 18 gobol.
← Akhri: Muwaadin Masaari ah oo u dhintay farxad! → Tirada iyo magacyada xubnaha kasoo jeeda degaanada Somaliland ee ku jira xukuumada RW Cumar